Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Ny Birao Afrikana momba ny fizahantany dia miray hina hatrany: any Rwanda izao
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • fivoriana • Vaovao • Rwanda Breaking News • Tourism • Travel Wire News
Hetsika fizahantany any Rwanda
Ny ankamaroan'ny firenena Afrikana dia mifoha amin'ny vaovao manimba ny firenena sasany manakatona ny dia any amin'ny firenena afrikanina sasany noho ny firongatry ny variana COVID-19 vaovao.
Ny tena ilain'i Afrika dia ny tena mijery lalina sy mampiray tanteraka ny fahatapahan-keviny ary manangana ny lova sy ny rafitra fanarenana ao anatiny sy eo anivon'izy ireo amin'ny fampiasana ny fizahantany ho sehatra mpanentana amin'ny fampiraisana ny ezaka rehetra ataon'ny firenena hihoatra ny voka-dratsin'ny coronavirus sy ireo variana maharitra maharitra izay tsy mitsaha-mitombo hatramin'izao.
Na dia eo aza ny vaovao mafimafy noho ny variana coronavirus vaovao antsoina hoe B.1.1.529, nisy ny fientanam-po tamin'ny hetsika Rwanda satria nahazo mari-pankasitrahana ireo mpitarika ny fizahantany ho fankasitrahana ny anjara andraikiny manoloana ny ezaka fanarenana ny indostrian'ny fizahantany.
Niorina tamin'ny taona 2018, ny African Tourism Board (ATB) dia fikambanana malaza iraisam-pirenena amin'ny maha-mpanentana ny fampandrosoana tompon'andraikitra amin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany mankany, avy, ary ao anatin'ny faritra Afrikana. Ny Fikambanana dia manome soso-kevitra mifanaraka, fikarohana lalina ary hetsika vaovao ho an'ny mpikambana ao aminy. Amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpikambana ao amin'ny sehatra tsy miankina sy ho an'ny daholobe, ny Birao Afrikana momba ny fizahantany dia manatsara ny fitomboana maharitra, ny lanjany ary ny kalitaon'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany any Afrika. Ny Fikambanana dia manome fitarihana sy torohevitra ho an'ny tsirairay sy ho an'ireo fikambanana mpikambana ao aminy. Ny ATB dia manitatra ny fahafahana ara-barotra, fifandraisana amin'ny besinimaro, fampiasam-bola, marika, fampiroboroboana ary fananganana tsena manokana. Raha mila fanazavana fanampiny, kitiho eto.